Iindaba-Ezaselwandle-ukwanda kwebango kuzisa amathuba amakhulu
Umzi mveliso wezolimo lwaselwandle uyanda kwaye uguquka ngokukhawuleza. Namhlanje, i-aquaculture i-akhawunti ye-50 yepesenti yeentlanzi zityiwe kwihlabathi liphela. Ukuxhomekeka kwintlanzi yaselwandle kulindeleke ukuba kuqhubeke ukwanda, kumaxesha aliqela izinga lokukhula kweminye imveliso yenyama. Oku kukhula kokuthembela kwinkcubeko yasemanzini kuzisa amathuba amakhulu, kodwa kukonyusa umngcipheko kubavelisi.
Njengokuba uxinzelelo lokonyusa isivuno sisanda, inkxalabo iyakhula malunga nefuthe leenkqubo ezivulekileyo zasemanzini kwindalo nakwizilwanyana zasendle ngenxa yezifo kunye nokwanda kwemveliso yenkunkuma. Kwangelo xesha, iintlanzi kunye neentlanzi ezikhuliswe kwiinkqubo ezivulekileyo zisemngciphekweni wokungenwa zizifo ezikhoyo kwindawo yendalo, kwaye kufuneka zixhomekeke kwimilambo okanye kwimisinga yolwandle ukuthwala iimveliso zenkunkuma kunye nokugcina iimeko ezifanelekileyo. Ukuphumeza amanyathelo okhuseleko olusebenzayo afunekayo ukukhusela iintlobo zemveli kunye nokukhusela indawo engenasifo kwisivuno esinempilo kunzima kwiinkqubo ezivulekileyo. Ezi zinto zonyuse imfuno yeenkqubo ezisekwe kumhlaba ezahlula iintlanzi ezifama kunye neembaza kubalingane babo basendle.
Iinkqubo ezivaliweyo zeluphu, iinkqubo ezisekwe etankini ezinje ngee-Reaculture Aquaculture Systems (RAS) okanye iinkqubo zokuhamba-hamba, zibonelela ngokwahlukana neentlobo zemveli kwaye zivumela ukwanda kwemveliso kumaziko ezolimo. Ezi nkqubo zineziqulatho zenza ukuba kube nakho ukudala iimeko ezifanelekileyo zempilo yezityalo, ukuphucula izivuno kunye nomgangatho. I-RAS isebenzisa amanzi amancinci.
Inkqubo ekhuselekileyo, ezinzileyo, engabizi mali nolawulo olupheleleyo- olwenziwe lula.